Qunsulkii dowladda Itoobiya u fadhiyey Garowe oo la dilay - Caasimada Online
Home Warar Qunsulkii dowladda Itoobiya u fadhiyey Garowe oo la dilay
Qunsulkii dowladda Itoobiya u fadhiyey Garowe oo la dilay
Garowe (Caasimada Online) – Dowladda Itoobiya ayaa qunsulka cusub u soo magacawday deegaanada Puntland, kadib markii qunsulkii hore sida ay werisay warbaahinta maxaliga ah lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya.
Qunsulkan cusub waxaa lagu magacaabaa Degnachew Yitbarek, waxuuna shalay soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Mid ka mid ah laba nin oo qunsiliyadan horay loogu soo magaacay, ayaa dhawaan lagu dilay dagaalkii lagu jebiyey maamulkii gobolka Tigray ee TPLF.
Labadii qunsul ee qunsulkan cusub ka horeeyey ee Itoobiya u fadhi jiray Garowe, waxay kala ahaayeen saraakiil ka kala tirsaneed sirdoonka iyo militeriga Itoobiya, waxayna ka soo jeedeen gobolka Tigray.
Sarkaalka la dilay waa kii xafiiska ku wareejin lahaa qunsulkan cusub ee Degnachew Yitbarek, waxuuna Soomaaliya ka tegay oo dib ugu laabtay gobolka lagu dilay ee Tigray, inta uusan qarxin dagaalkii dowladda dhexe iyo is-maamulkii Tigrayga, kaas oo xulufadiisii TPLF gabi ahaanba lagu burburiyey.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa qunsulka cusub markii uu soo gaaray magaalada Garowe, waxuu ku qaabilay madaxtooyada, kahor inta uusan si rasmi ah ula wareegin xafiiska qunsiyadda Itoobiya ee Garowe.
Qoraal kooban oo Madaxtooyada Puntland ay ka soo saaray kulankaas ayaa lagu yiri, “Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay Qunsulka cusub ee Ethiopia ee Puntland Mr Degnachew Yitbarek.”
Dowladda Itoobiya waxay haatan aad u adkeysay xuduudaheeda, waxayna weli baacsi ku heysaa inta ka hartay xubnihii TPLF oo duurka galay, halka qaarkoodna ay u gudbeen dalalka deriska la ah Itoobiya.